macOS Sierra မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Siri ကို ကွန်ပြူတာမှာ အသုံးချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Share on Facebook Share on Twitter + 1 Shares
72 Views Home NEWS Local HOW TO FEATURES Knowledge Interview Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Random Download Android iOS Window FUNNY PHOTOS HUBS Android Apple Samsung Apple FEATURES HUBS Pc & Laptops Softwares & ApplicationmacOS Sierra မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Siri ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ Ye Wint Oct 22, 2016 1 72
Apple ရဲ့ နာမည်ကျော် AI ပရိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့ Siri ဟာ အခုဆိုရင် macOS Sierra စနစ်အသစ်နဲ့အတူ ကွန်ပြူတာပေါ် စတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတုန်းကလိုပဲ ကိုယ်လိုချင်သမျှ သတင်းအချက်အလက်၊ရှာဖွေမှုတွေကို Siri ကနေတဆင့် အသံနဲ့ ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ပြူတာသုံးရတာ ပိုမိုလွယ်ကူမှုရှိလာမှာပါ။ Multi-tasking လုပ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း တော်တော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာလိုတော့ ခလုတ်တစ်ခုထဲဖိနှိပ်ထားရုံနဲ့ Siri ကို ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲ၊ ကွန်ပြူတာမှာ command key ရယ် spacebar ရယ် နှစ်ခု ဖိနှိပ်ပေးရမှာပါ။ အရင် OS X တုန်းက Spotlight ဖွင့်သလိုပါပဲ။ ဒီ shortcut ကီးကို ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ခလုတ်မနှိပ်ဘဲ အရင်လို “Hey Siri” လို့ပဲ ခေါ်သုံးနိုင်အောင်လည်း လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် “show me files I worked on last week” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်အရင်တစ်ပတ်က လုပ်နေတဲ့ဖိုင်တွေကို တကူးတကပြန်ရှာနေစရာမလိုဘဲ၊ Siri က အလိုလိုရှာပေးသွားမှာပါ။
အရင်တစ်ပတ်က ကိုယ်သုံးဖြစ်တဲ့ဖိုင်တွေက များနေတယ်ဆိုရင်လည်း “just PDFs” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ PDF တွေကိုပဲ ရွေးရှာပေးသွားမှာပါ။ ကဲ..ဘယ်လောက်မိုက်သလဲ။
ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ Siri ကို သင့်အဝင်အီးမေးလ်တွေကို စစ်ခိုင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ “Do I have any emails from Boris today?” လို့ မေးလိုက်တာနဲ့ Siri က Boris ဆီက အဝင်မေးလ်ရှိလားဆိုတာကို စစ်ဆေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားတာဝန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Desktop ဖိုင်တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် “show me my desktop files” စသဖြင့် ခိုင်းစေနိုင်သလို၊ ဖိုင်နာမည်အတိအကျသိရင် “show me files called presentation” စသဖြင့် အတိအကျခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Siri on social media
သင့်ရဲ့ဆိုရှယ်အကောင့်တစ်ခုခုကို macOS Sierra နဲ့ ချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်၊ ဆိုရှယ်ကွန်ရက်တစ်ခုခုပေါ်ကို ပို့စ်တင်ဖို့အတွက် စာရိုက်နေစရာမလိုပါဘူး။ Siri ကို အသံနဲ့တင် ကိုယ်တင်ချင်တာကို တင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ( About this Mac > System Preferences > Internet Accounts ) မှာ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဆိုရှယ်အကောင့်ကို ချိတ်ပေးရမှာပါ။
Twiiter မှာ တင်ချင်တယ်ဆိုရင် “tweet (ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကား)” ကို ပြောပြီး tweet လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း “post to Facebook” လို့ ပြောပြီး နောက်က ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားကို ပြောလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီ့အပြင် ရေပန်းစားနေတဲ့ hashtag တစ်ခုခုကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း “what are people saying about hashtag new macOS” လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဒီ hashtag သုံးပြီး တင်ထားတဲ့ tweet တွေ ပို့စ်တွေကို Siri က ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
macOS Sierra ရဲ့ Siri ကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အလွယ်တကူပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ“Show me the photos I took last night” (သို့) “show me photos from Singapore” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့အချိန်၊ နေရာအလိုက်လည်း ခွဲရှာလို့ရပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်ကပုံတွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ “search the Web for images of (ကိုယ်ရှာချင်တာ)” ကို ပြောလိုက်ရုံနဲ့ ပုံတွေ ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ Settings ပြင်၊ Apps တွေ ဖွင့်မယ်
Siri ကို သုံးပြီး အသံနဲ့တင် ကွန်ပြူတာ Settings တွေပြင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
“Change my screen brightness” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အလင်းအမှောင်ချိန်လို့ရမှာဖြစ်သလို၊ “mute the volume” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အသံတိတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အပြင် Siri နဲ့ ကွန်ပြူတာ sleep လုပ်တာ၊ ‘Do Not Disturb’ ဖွင့်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခြား ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုလည်း Siri ကို ဖွင့်ခိုင်းနိုင်မှာပါ။
FaceTime ခေါ်၊ မက်ဆေ့ပို့မယ်
ဖုန်းတုန်းကလိုပဲ ကွန်ပြူတာမှာလည်း Siri ကို မက်ဆေ့ပို့ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ “message (လူနာမည်)” ကိုပြောပြီး အနောက်က ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်ရုံနဲ့ Siri က မက်ဆေ့ပို့ပေးမှာပါ။ “FaceTime” ခေါ်ချင်လည်း အလားတူပါပဲ။
Desktop Siri ကလည်း မိုဘိုင်း Siri နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ အခုဘာရုပ်ရှင်ကားတွေ တင်နေသလဲမေးလို့ရသလို၊ မနက်ဖြန်မိုးရွာမှာလားလို့ လည်းမေးနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးရမှာ ရှက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံး Siri ကို မေးနိုင်သလို၊ အပျင်းပြေလည်း စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
သတိမေ့တတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ Reminder သတ်ိပေးခိုင်းတာတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Yes ။ ပေါက်ကရမေးခွန်းတွေလည်း မေးလို့ရဦးမှာပါ။
Ref: The Next Web
Facebook Comments Share Post
About Ye Wint A perfect combination of cosmic dusts. View all posts by Ye Wint Previous articleMi Note2မှာ Curved Display ကိုအသုံးပြုထားကြောင်း Xioami အတည်ပြု
Next articleSamsung ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး RAM 6GB ပါဝင်တဲ့ Galaxy C9 Pro
You may be interestedFEATURES, Mobile & Tablets, Softwares & Application123 shares176 viewsသင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းKo Thuya - May 25, 2017သင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း က ဘာလဲလို့ မေးရင် အဖြေကတော့ အလွန် ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါက စကရင်ကို Lock လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်း ပိုင်ရှင် အများစုဟာ အခြေခံကျပြီး အစွမ်းထက်တဲ့ လုံခြုံရေးကို…FEATURES, HUBS, Mobile & Tablets167 shares248 viewsVivo V5 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းKo Thuya - May 25, 2017Vivo V5 ဟာ Selfie အထူးပြု စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်မှာ 20MP Camera တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာကလည်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Chipset က စွမ်းရည်သင့်တင့်ပါတယ်။ HD Display သာ တပ်ဆင်ထားတာက အားနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။…HUBS, Local, Local News87 shares110 viewsအူရီဒူးမြန်မာမှ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် သီးသန့် ကွန်ရက် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင်Thoe Gyi - May 25, 2017အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် မြန်ဆန်သည့် အင်တာနက်ဖြင့် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် ၀န်ဆောင်မှုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ IP-VPN သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ရုံးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နယ်မြေဒေသအသီးသီးတွင်ရှိသည့် ရုံးခွဲများအား အချိန်တိုင်းအစဉ်မပြတ် သီးသန့်ကွန်ရက်ဖြင့် အဆက်အသွယ်ရှိနေစေနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ယင်း ဝန်ဆောင်မှုသည် လူအများစုမှတစ်ပြိုင်နက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊…Most from this categoryFacebook, HUBS, NEWS153 shares133 viewsFacebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီzayarsan - May 25, 2017Acer, FEATURES, HUBS154 shares244 viewsAcer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များThoe Gyi - May 25, 2017Drone, Gadgets, Gadgets0 shares22 viewsလက်ဟန် ခြေဟန် နဲ့ ခိုင်းစေလို့ရမယ့် ဒရုမ်း ကို မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခန့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလို့ ရရှိနိုင်zayarsan - May 25, 2017Gadgets, HUBS, Knowledge700 shares907 viewsမြန်မာငွေ ၃ သိန်း ခန့်သာ ရှိမယ့် MiMax2ကို ရှောင်မီ ထုတ်ဖော်ပြသzayarsan - May 25, 2017 Our Picks Facebook, HUBS, NEWS153 shares133 viewsFacebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီzayarsan - May 25, 2017Acer, FEATURES, HUBS154 shares244 viewsAcer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များThoe Gyi - May 25, 2017Drone, Gadgets, Gadgets0 shares22 viewsလက်ဟန် ခြေဟန် နဲ့ ခိုင်းစေလို့ရမယ့် ဒရုမ်း ကို မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခန့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလို့ ရရှိနိုင်zayarsan - May 25, 2017Most Popular
သင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း May 25, 2017Vivo V5 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း May 25, 2017အူရီဒူးမြန်မာမှ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် သီးသန့် ကွန်ရက် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင် May 25, 2017Facebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီ May 25, 2017Acer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များ May 25, 2017 Get the best viral stories straight into your inbox!
Popular PostsViber ထဲက ဖျက်ပြီးသားမက်ဆေ့တွေကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ May 19, 2016A4 စာရွက်နဲ့ သစ်သားချောင်းတွေကိုတောင် ဖြတ်တောက်ပြခဲ့တဲ့ YouTube ဗီဒီယို Aug 23, 2016အထိအတွေ့ကို ခံစားနိုင်တဲ့ သိန်း ၁၂၀ တန် စမတ်အဖော် Mar 24, 2017အင်္ကျီအ၀တ်အစားတွေကို တစ်မိနစ်အတွင်း ပြန့်နေအောင်ခေါက်ပေးနိုင်တဲ့ အ၀တ်ခေါက်စက် Jun 07, 2016အလုပ် ရသွားတဲ့ Galaxy Note7ဖုန်းများ Apr 04, 2017Hot Postsလမ်းမှာ ရုတ်တရက်တွေ့တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုရှာပေးမယ့် App Mar 15, 2017အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် စမတ်ဖုန်းကနေ အပြာကား ပိုမိုကြည့်ရှု Mar 09, 2017ကျောင်းသားတွေ စာခိုးချနိုင်ဖို့ အထူးစီမံထားတဲ့ စမတ်နာရီကို စတင်ရောင်းချ Mar 07, 2016Huawei အား ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း အလျော်ပေးရမယ့် Samsung Apr 09, 2017ဘီလ်ဂိတ် က သူ့သား၊ သမီးတွေကို အသက် ၁၄ နှစ်မှသာ ဖုန်းကိုင်ခွင့်ပြု May 19, 2017Latest Postsသင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း May 25, 2017Vivo V5 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း May 25, 2017အူရီဒူးမြန်မာမှ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် သီးသန့် ကွန်ရက် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင် May 25, 2017Facebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီ May 25, 2017Acer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များ May 25, 2017 Copyright 2016. DigitalTimes.com.mm